Munaasibada sanadguurada 60-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo la joojiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMunaasibada sanadguurada 60-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo la joojiyay
April 12, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada Daraawiishta Puntland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Munaasibada sanadguurada 60-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa la joojiyay, taasoo qeyb ka ah dadaalada looga hortagayo faafista cudurka coronavirus, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka.
Xuska ayaa waxaa qeyb ka ahaa gaado-kaciyaarka ciidamada oo lagu qaban lahaa dalka oo dhan maanta oo bishu tahay 12-ka April, 2020. Ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa la asaasay 12-kii April sanadkii 1960.
Tirada guud ee cudurka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliya ayaa ah 21 qof, sida ku cad xogta Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya iyo haayada WHO.
Arbacadii, qofkii ugu horeeyay ayaa gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday xanuunka coronavirus. Qofka xanuunka u dhintay ayaa ahaa muwaadin Soomaali oo 58-jir ah.
April 10, 2020 Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in coronavirus uu si aayar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda
April 21, 2019 Guddoomiyaha cusub ee bankiga dhexe ee Soomaaliya oo xafiiska la wareegay
Xaalada Gaalkacyo oo xasiloon kadib madaafiic cul-culus oo shalay la is-dhaafsaday
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Xaalada guud ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa saakay oo Talaado ah degan kadib madaafiic cul-culus oo shalay ay isku adeegsadeen ciidamo kala taageersan Puntland iyo Galmudug. Dhawaaqa madaafiicda la isku adeegsanayay [...]